टमाटर एक फल हो? | पोस्टपोस्ट
टमाटर एक फल हो?
लौरा Torres प्लेसहोल्डर छवि | 13/05/2022 12:02 | जिज्ञासा, Gastronomy
हामी धेरै जसो फलफूल र तरकारीहरू बीच सजिलै फरक गर्न सक्षम छौं, तर जब यो उमेर पुरानो प्रश्नको कुरा आउँछ। टमाटर एक फल वा तरकारी हो, हामीलाई के जवाफ दिने थाहा छैन! उत्तरapriori टमाटर फल र तरकारी दुवै हो। जबकि फलफूल र तरकारीहरू हाम्रो सिफारिस गरिएका5दैनिक सर्भरहरूमा गणना हुन्छन्, तिनीहरू बीच उल्लेखनीय भिन्नताहरू छन्।
यद्यपि, यो तपाईं वनस्पति परिभाषा प्रयोग गर्ने वनस्पतिविद्सँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ वा खानाको परिभाषा प्रयोग गर्न सक्ने पोषणविद् वा कुकसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन सक्छ।। यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि टमाटर फल वा तरकारी हो र तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ, यो रोचक लेखमा हामीसँग सामेल हुनुहोस्।
यो प्रायः सुनिने सामान्य वनस्पति प्रश्नहरू मध्ये एक हो। धेरै मानिसहरूको लागि, स्याउ वा केराको तुलनामा टमाटरमा सलाद वा फूलगोभीसँग धेरै मिल्दोजुल्दो हुन सक्छ, तर के यो साँच्चै हो? त्यसैले केही मानिसहरू यसलाई तरकारी हो भनेर दृढ विश्वास गर्छन् किनभने हामी यसलाई तरकारीसँग जोड्छौं, जबकि अरूहरू असहमत छन् र यसलाई फल मान्छौं। दैनिक किनमेलको दृष्टिकोण के हो र विज्ञान के हो?
1 मुख्य प्रश्न, टमाटर फल वा तरकारी हो?
1.1 टमाटर फल हो भने तरकारी किन भनौं ?
2 तरकारी र फलफूल बीचको भिन्नता
3 त्यसोभए टमाटर तरकारी हो?
मुख्य प्रश्न, टमाटर फल वा तरकारी हो?
लेखको अन्त्यको लागि पर्खन नसक्नेहरूका लागि, यहाँ द्रुत जवाफ छ: टमाटर एक फल हो। त्यसोभए अब तपाईले आफैलाई सोध्नुहुनेछ कि किन तिनीहरू कुनै पनि सुपरमार्केट वा छिमेकको हरित ग्रोसरको तरकारी खण्डमा, काकडी वा कद्दू जस्तो चीजको छेउमा पाइन्छ। ठीक छ, यो पढ्नेहरूको आश्चर्यमा, काकडी र कद्दूहरू, उदाहरणका लागि, कम्तिमा वनस्पति अर्थमा पनि फलहरू हुन्। पछि हामी फलफूल र तरकारीहरू बीचको परिभाषा र भिन्नतालाई राम्रोसँग स्पष्ट गर्नको लागि टिप्पणी गर्नेछौं।
एक परिचयको रूपमा हामी तपाइँलाई बताउछौं टमाटर Solanaceae जातको फल हो (सोलानम लाइकोपर्सिकम), त्यसैले यो एक फल हो किनभने यसले बोटको फल बनाउँछ।
टमाटर फल हो भने तरकारी किन भनौं ?
तपाइँलाई सन्दर्भमा राख्नको लागि, टमाटर एक फल वा तरकारी हो कि भन्ने बारे पहिलो छलफल XNUMX औं शताब्दीको अन्त्यतिरको हो। वर्षमा 1886न्यूयोर्कमा, सबै महत्त्वपूर्ण तरकारीहरूमा लागू हुने १०% कर स्वीकृत गरिएको थियो। यस सन्दर्भमा, भारतबाट न्यूयोर्क आएका व्यापारी जोन निक्सले टमाटर फल भएको भन्दै भन्सार अधिकारी एडवर्ड हेडनबाट कर तिरेको दाबी गरेका छन् । र त्यसैले तिनीहरू करमुक्त थिए।
यो बहस अदालतसम्म पुग्यो, तीन वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले टमाटर तरकारी हो र त्यसले महसुलको अधीनमा रहेको घोषणा गर्‍यो। यद्यपि न्यायाधीश जे होरेस ग्रेले त्यस समयमा स्वीकार गरे टमाटरहरू वनस्पतिको रूपमा फल हो र यसैले, एक फल हो, सामान्य भाषामा तिनीहरूलाई यसरी मानिदैन किनभने तिनीहरू सलाद वा बेलुकाको खानामा सेवा गरिन्छ, मिठाईमा होइन, जसरी फल सामान्यतया सेवा गरिन्छ।
तसर्थ, टमाटरको वर्गीकरणलाई वनस्पति, पाक वा सामान्य अनुसार खरिद गर्दा छुट्ट्याउने उदाहरण स्थापित भएको थियो। जसका कारण आज पनि चर्चा चलिरहेको छ ।
तरकारी र फलफूल बीचको भिन्नता
सबैभन्दा पहिले, हाललाई फलफूल वा तरकारीलाई के मानिन्छ भन्ने आधारभूत परिभाषा दिन महत्त्वपूर्ण छ। यो भनिन्छ कि यी सर्तहरू मध्ये कुनै पनि वनस्पति विज्ञानको प्राविधिक अवधारणा होइन, विशेष गरी तरकारीको, तर दुवैको सामान्य परिभाषा छ।
पहिलो, तरकारी, हामी मानिसले खाने फल बाहेक बिरुवाहरु को खाद्य भागहरु हो। तपाईले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यो एक धेरै सामान्य विवरण हो जसमा हामीले पातहरू खान्छौं र ती प्रजातिहरू जसको डाँठ, फूल, जरा, बल्ब वा ट्युबरहरू हामीले खान्छौं दुवै प्रजातिहरूलाई समेट्छ।
र दोस्रो स्थानमा, फल यो कुनै पनि बिरुवा को फल को खाद्य भाग हो। जडिबुटी, झाडी वा रूख होस्, यसलाई फल मानिन्छ जबसम्म यो परिपक्व अण्डाशय हो जसमा बिरुवाको बीउ र पल्प हुन्छ र खान योग्य हुन्छ। यद्यपि आधुनिक कृषिले अपरिपक्व, शून्य, वा मुश्किलले बुझ्ने बीउहरू सहित केही प्रजातिहरू उत्पादन गर्न व्यवस्थित गरेको छ, फलले सधैं बोटमा प्रजनन कार्य पूरा गर्दछ।
यस कुरालाई ध्यानमा राखेर, त्यहाँ बागवानी उत्पादनहरूको प्रचुरता छ जुन सामान्यतया तरकारीहरूका रूपमा लिइन्छ, र जुन वास्तवमा फलहरू हुन्, कम्तिमा थप औपचारिक, वनस्पति अर्थमा।
त्यसोभए टमाटर तरकारी हो?
यति धेरै भनिए पनि, टमाटर फलफूल हो तर तरकारी होइन भनेर निश्चित रूपमा भन्न सजिलो छैन। उदाहरणका लागि, RAE ले यसलाई निम्न रूपमा परिभाषित गर्दछ:
१ मि रातो बेरी, टमाटरको बोटको फल, चिल्लो र चम्किलो सतहको साथ, जसको लुगामा धेरै हदसम्म चपटा र पहेंलो बीउहरू छन्।
यद्यपि, त्यहाँ टमाटर प्रजातिहरू छन् जुन अन्य भन्दा मीठो स्वाद छ। यो स्पष्ट रूपमा स्ट्रबेरी वा केरा जस्तो मीठो छैन, त्यसैले यो क्रिस्पर बक्समा चिप्लन सजिलो छ। वास्तवमा, टमाटर न मीठो छ न नुन: यो उमामी हो, एक स्वाद जुन आजको खानामा अधिक र अधिक पाइन्छ। उमामी स्वादलाई हल्का र लामो स्वादको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। उदाहरणका लागि, निको भएको मासु, समुद्री खाना, र किण्वित खानाहरू जस्तै चीज, वा यस अवस्थामा टमाटरको स्वाद।
टमाटर तरकारी हो कि होइन भन्ने कुरामा फर्किदा, तरकारीलाई सामान्यतया हामीले बगैंचामा उब्जाउने र खानाको लागि खाने फलफूल र अन्न बाहेकका बिरुवा मानिन्छ। त्यसोभए हामी टमाटरको बोटको फल मात्र खान्छौं, जसले बोटलाई थप खाना उत्पादन गर्न जारी राख्न अनुमति दिन्छ, प्राविधिक रूपमा तरकारी मानिदैन। यद्यपि यो संसारभरका बगैंचामा हुर्काइन्छ। यसका बावजुद, यो थाहा छ कि यसले टमाटरहरूलाई अन्य फलफूलहरू जस्तै काकडी वा मिर्चको साथ एक समूह साझा गर्नबाट रोक्दैन, तिनीहरूको खाना प्रयोगको कारणले तरकारीहरू मानिन्छ।
मलाई आशा छ कि यो लेख टमाटर जस्तै भूमध्य आहार मा एक आधारभूत खाना बारे थप जान्न को लागी उपयोगी भएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: पोस्टपोस्ट » Gastronomy » टमाटर एक फल हो?
नास्तिक र अज्ञेयवादी बीचको भिन्नता
किन बिरालोहरु purr गर्छन्